Hetsika mifandraika: Raha mampiasa rindrambaiko maimaim-poana isika, mpijirika ihany koa ve isika? | Avy amin'ny Linux
Hetsika mifandraika: Raha mampiasa rindrambaiko maimaim-poana isika, hacker koa ve isika?
Rindrambaiko maimaim-poana sy hetsika Linux miaraka amin'ny Hetsika hacker
Betsaka ny zavatra nolazaina misaraka, eto amin'ny Blog sy amin'ny Global Internet Ecosystem momba ny Free Software Movement (SL) sy ny Hacker Movement. Na izany aza, betsaka ny tsy mahalala ny tantaran'ny fihetsiketsehana roa na feno. Ary matetika izy ireo dia manana fisalasalana, raha misy ifandraisany amin'ny iray hafa, na raha mifanohitra izy ireo na mifandray.
Na ny fanontaniana hoe "Raha mampiasa rindrambaiko maimaimpoana ve isika dia mpijirika?" ary ny fototr'izany dia mazàna no iharan'ny fanesoana (Memes sy sangy vazivazy) amin'ny azy manokana sy ireo izay ivelan'ny fiarahamonina misy ny hetsika roa. Fa inona no marina amin'ny fanontaniana toy izany? Fihetsika iza no voalohany? Nisy fiatraikany tamin'ny famoronana sy / na fivoaran'ny hafa ve ny voalohany? Ireo fanontaniana ireo sy ireo hafa izay ezahinay hazavaina amin'ity lahatsoratra kely manetriketrika ity.
2 Hetsika teknolojia-politika sy / na Techno-sosialy
2.1 Ny hetsika hacker
2.2 Ny hetsika rindrambaiko maimaimpoana
3 Fifandraisana eo amin'ny Hetsiky ny lozisialy malalaka sy ny hetsiky ny hacker
Tamin'ny fotoana hafa tao amin'ny DesdeLinux Blog dia niresaka momba ny lohahevitra mitovy amin'izany izahay na mifandraika amin'ny foto-kevitra iray na roa, izany hoe Free Software sy Hackers. Anisan'ireo lahatsoratra farany azonay lazaina avy amiko:
«Fampianarana hacking: Ny hetsika rindrambaiko maimaim-poana sy ny fizotran'ny fanabeazana"ary
«Crypto-anarchism: Rindrambaiko maimaim-poana sy ny vola ara-teknolojia, ny ho avy?".
Avy amin'ny Blogger «ChrisADR» ilay lahatsoratra hoe: «Inona no tena dikan'ny hacker?".
Ary ho an'ny maro, ny fifandraisana sy ny niandohan'ny «Hetsika Techno-politika sy Techno-social» dia mety ho tsy fantatra. Na izany aza, ny marina dia manana fiaviana iraisana izy ireo, ary mizara tantara mitovy amin'ny tanjona mitovy amin'izany, na amin'ny lafiny teknolojia, politika na sosialy.
Tantara iray mahazatra izay matetika notantaraina tamin'ny niandohan'ny Teknolojian'ny fampahalalana sy ny fifandraisana (TIK) ankehitriny latsaky ny 100 taona lasa izay., indrindra hatramin'ny nanombohan'ny «Internet» sy ireo teknolojia mifandraika amin'ny foto-kevitry ny "Internet of zavatra".
Ary tanjona iraisana izay matetika mifandraika amin'ny tsiambaratelo sy ny filaminan'ny tsirairay. Ary amin'ny fahafahan'ny tsirairay mianatra, mampianatra, mamorona, mizara, mampiasa ary manova ny zava-drehetra (ara-teknolojia na tsia) izay azon'izy ireo atao ao anatin'ny fiarahamonina ankehitriny. Izany rehetra izany amin'ny fomba malalaka fa miaraka amin'ny vokany mahery vaika, mahomby ary manavao, amin'ny olona betsaka indrindra amin'ny sehatra sosialy, toekarena ary politika, ary tsy mijanona amin'ny sisintany ara-jeografika, ara-pinoana sy ara-kolontsaina.
Ary miaraka amina tanjona iraisana hiteraka taranaka olom-pirenena vaovao sy hetsiky ny olom-pirenena mankasitraka sy / na hahatratra ny fiovana ao aminy, sy amin'ny fiarahamoniny sy ny governemanta misy azy avy. Io kosa dia miteraka paradigma vaovao sy vaovao amin'ny maodelim-pitantanana, fiaraha-miaina, famokarana, fanabeazana, fanofanana, fianarana ary famoronana, manaraka ireto toro lalana mendri-kaja sy hajaina ireto: "Malalaka, Misokatra, Azo idirana ary azo antoka."
Hetsika teknolojia-politika sy / na Techno-sosialy
Rehefa nivelatra ara-teknolojia ny Humanity dia nandia dingana samihafa izy, amin'ny taha na ambaratonga samihafa, miankina amin'ny faritra amin'ny planeta, izany hoe amin'ny firenena na kaontinanta. Nanomboka tamin'ny revolisiona ara-teknolojia indostrialy farany ka hatramin'ny revolisiona ara-teknolojia nomerika farany teo, fanovana ara-politika sy sosialy maro no nitranga, izay nanova ny fitsipi-pitondran-tena sy kolontsaina (toetoetran'ny) olona sy / na fiarahamonina.
Ary noho izany, talohan'izay, nandritra ary aorian'ny vanim-potoana tsirairay na dingana misy ny maha-olombelona, ​​dia samy hafa ny nipoitra ary hipoitra. hetsika miorina amin'ny fampiasana ny haitao sy ny fahalalana isaky ny fotoana. Hetsika izay miavaka amin'ny hafa, ho an'ny fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny tantaran'ny olombelona. Saingy androany, ny hetsika izay tena maneno dia:
Ny hetsika hacker
Fahatakarana amin'ny lafiny malalaka sy azo ampiharina fa a "Hacker" dia olona mahafehy fahalalana, zavakanto, teknika na teknolojia tena tsara na tsara tanteraka, na maro amin'izy ireo amin'ny fotoana iray, ary mitady sy mitohy manalavitra na mihoatra an'io. amin'ny alalàn'ny fandalinana sy ny fampiharana tsy tapaka, manohana ny tenany sy ny hafa, izany hoe ny maro an'isa.
Avy amin'ity foto-kevitra ity dia azo tsoahina fa ny "Hackers" dia matetika no nifangaro tamin'ny "Genius" isaky ny vanim-potoana, ary noho izany dia efa nisy hatramin'ny niandohan'ny zanak'olombelona mihitsy. Mamela na mankasitraka ny fanovana sy ny revolisiona amin'ny alàlan'ny fandrosoana ara-teknolojia misy amin'ny vanim-potoana tsirairay.
Ary miaraka amin'ny fahatongavantsika amin'ny vanimpotoana maoderina an'ny TIK (Informatika / Computing) ary indrindra ny Internet sy ny Internet amin'ny zavatra, Ny "hackers" ankehitriny dia ireo izay mahatratra amin'ny alàlan'ny TIK, ny fanovana lehibe sy ilaina aminy.
Mba hahatratrarana azy dia fanovana ireo sehatra lehibe hafa toa ny Fanabeazana, ny Politika na ny Toekarena, na manohitra ireo sehatra na tombontsoa sasany, izay mazàna manimba ireo olona maro anisa na voahitsakitsaka, amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Ny hetsika rindrambaiko maimaimpoana
Ny fahazoana amin'ny heviny malalaka sy azo ampiharina amin'ny lozisialy maimaim-poana ho an'io sombin-rindrambaiko io dia novolavolaina tsirairay na niaraka tamin'ny foto-kevitra fototra na ny fahalalahana efatra (4) izay:
Raisina an-tsaina izany, ny niandohan'ny Hetsika SL dia azo zahana hatramin'ny fotoana nanjary fahita mahazatra ny informatika tany amin'ny taona 50/60 tany ho any. Ny ankamaroan'ny rindrambaiko dia noforonin'ireo mpahay siansa, akademika ary vondrona mpikaroka iray ihany.
Niara-niasa ireo olona rehetra ireo. Ary niaraka tamin'ny fanampian'ny vondron'ireo mpampiasa dia nizara ireo vokatra farany voalaza izy ireo mba hahafahan'izy ireo manova mba hahatratrarana ny fandaminana ilaina sy / na ny fanatsarana aorinan'izany.
Ary manodidina ny taona 80 tany ho any izy io, rehefa misy endrika sy fahitana, izay amin'izao fotoana izao dia ny »Techno-social» Hetsika ho an'ny lozisialy maimaim-poana sy GNU / Linux. Izany dia noho ny fisian'ny hetsika sy ny vondrom-piarahamonina vonona hanome fahafaham-po ny filàna tetikasa maimaim-poana sy maimaim-poana. Mba hiadiana amin'ny fivoarana goavana sy maro an'isa an'ny lozisialy tsy miankina.
Raha hiverenana amin'ny fotoana niarahan'ny fampandrosoana ny solosaina sy rindrambaiko voalohany dia fiaraha-miasa lalina sy akademika. Hatramin'izao, raha ny SL sy GNU / Linux Movement dia mitana toerana haja ao anatin'ny tantaran'ny teknolojia ankehitriny. Hatramin'ny lozisialy rehetra noforonina, ny Rindrambaiko Maimaimpoana ary ny ampahany betsaka amin'ilay antsoina hoe Indostria fampandrosoana ny lozisialy dia mifototra amin'ny fotokevitra (fahalalahana).
Ity fandraisana anjara ity dia fanehoana teknolojia-kolontsaina sarobidy, olona / iraisana (olom-pirenena) ary na dia ara-barotra (orinasa) manan-danja manerantany aza, misy ifandraisany be amin'ny firenena sasany noho ny an'ny firenena hafa. Ny hetsika hafa izay tsy dia manandanja loatra ary mitovy ny laharana misy ny fandraisana anjara lehibe amin'izany, dia ny Hetsika Cyberpunks sy ny Hetsika Cryptoanarchist.
Fifandraisana eo amin'ny Hetsiky ny lozisialy malalaka sy ny hetsiky ny hacker
Raha fintinina dia afaka milaza isika fa ny fifandraisana dia miharihary amin'ny fisehoan-javatra sy ny symbiotic. Koa satria ny Hetsiky ny lozisialy maimaim-poana dia miseho ho azy avy amin'ny Hetsika hacker tamin'ny taona 50/60. Ary mbola mijanona mandraka androany ny valiny voajanahary avy amin'ny Fikambanana Teknolojia.
Valiny iray tsy tokony havela amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Varotra, Varotra tsy miankina ary mihidy (SCPC) misy, mitantana na manodinkodina tanteraka amin'ny alàlan'ny anton-kery ambony amin'ny sehatra teknolojia, toekarena ary politika.
Ary ho setrin'izany, ny Free Software Movement dia manome ny Hetsika Mpijirika amin'ny fomba marina ny teknolojia Rindrambaiko. Dikan-teny mamela azy ireo hanatanteraka ny asa hahatratrarana sy hitazomana ny fahalalahana maoderina sy ny fahalalahana ara-teknolojia amin'ny ampahany lehibe amin'ny Fikambanan'ny Olombelona. Tsy manadino ny fahaverezan'ny zonao hanana fiainana manokana, filaminana ary fahalalahana isam-batan'olona sy iraisana.
Fomba moderina sy fahalalahana ara-teknolojia iray izay mirona ihany koa ho irery noho ny halafosany, ny fetrany ary ny fatiantoka ratsy amin'ny fampiasana ny SCPC. Indrindra ao amin'ny fiarahamonina izay ny fireneny dia tsy manome fidiram-bola na harena ampy hahazoana azy ireo sy hanavao azy ireo hatrany.
Na any amin'ireo firenena izay ezahan'ny Governemanta na sekta ekonomika modely na mifehy ny valalabemandry amin'ny alàlan'ny fampiasana SCPC sasany. Fandaharana na Sehatra izay manatitra, mandray ary / na mivarotra ny angon-tsainay miaraka na tsy nahazo alàlana, manafika ny fiainantsika manokana na manodikodina ny hevitsika sy ny zava-misy iainantsika.
Aorian'ny famakiana ity famoahana ity sy ireo fanontana natolotray ao amin'ny Blog, dia manoro hevitra izahay tohizo ny famakiana izao manaraka izao «Boky nomerika mifandraika amin'ny lohahevitry ny Free Software Movement sy ny Hacker Movement»Ao amin'ny PDF.
Manantena izahay fa ireo fitaovana rehetra ireo dia manampy anao hahatakatra amin'ny endriny mety ny fifandraisana misy eo amin'ny samy Hetsika, izany hoe eo amin'ny Hetsika Rindrambaiko Malalaka sy ny Hetsika Hacker. Ary izany dia ho an'ny fanatsarana sy fanatsarana manokana ny momba ny lohahevitra ho an'ny maro an'isa. Izay fandraisana anjara, fisalasalana na fanontaniana mipetraka, dia aza misalasala manome hevitra momba ny famoahana.
Tadidio: «Raha mamorona sy / na mampiasa rindrambaiko maimaim-poana ianao dia efa mpijirika, maninona ianao no mandray anjara ara-teknolojia amin'ny tolona fotsiny sy ny idealy politika sy sosialy.»- Mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Hetsika mifandraika: Raha mampiasa rindrambaiko maimaim-poana isika, hacker koa ve isika?
Vampira alina dia hoy izy:
"Raha mamorona sy / na mampiasa rindrambaiko maimaim-poana ianao dia efa mpijirika", dia ho hacker koa i Microsoft, satria mandray anjara amin'ny lozisialy maimaimpoana izany sa tsia? Ny tiako holazaina dia hoe tsy fantatro, sa diso aho? xD
Valiny amin'ny Night Vampire
Ny priori iray dia afaka nilaza hoe: "Manoloana ny lojika toy izany dia tsy misy ny ady hevitra mety hitranga" fa i Microsoft amin'ny maha "Global Commercial Company" dia mandoa "hacker" maro izay mahafehy ny "Arts of Free Software" hahafahany manao izay ataony. "Hiteraka fidiram-bola ho an'ny tompony". Noho izany, tsy Organisation Hacker izy ireo, angamba ny FSF, Mozilla na Red Hat na Suse, fa tsy Microsoft velively.
Ny Linux Foundation dia nandefa tetikasa ELISA ho an'ny rafitra matoky tena